राष्ट्र बैंकमा एमालेकै अराजकता ! - Everest Dainik - News from Nepal
राष्ट्र बैंकमा एमालेकै अराजकता !
काठमाडौं, वैशाख १८ । मुलुकको केन्द्रीय बैंकले गत शुक्रबार आफ्नो स्थापनाको ६३ औँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ ।
मुलुक जर्जर आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा नयाँ सरकारको गठन भएको हो ।
स्वयम् केन्द्रीय बैंक पनि तीन बर्षअघिको भुकम्पले नराम्रोसँग थिलथिलो भएको छ ।
याे पनि पढ्नुस टिकट बाँड्दा एमाले नेतृत्वको ‘प्रेसर’ बढ्यो (फाेटाे फिचर)
तरपनि मुलुक र नेपाली जनतको निम्ति मौद्रिक क्षेत्रबाट पुर्याउनुपर्ने
योगदानको निम्ति राष्ट्र बैंक आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमना तथा पुपारीवेक्षण गरी सर्वसाधारणलाई नेपाली बैंकिग प्रणालीप्रति थप विश्वास दिलाउनु उसको कर्तव्य हो ।
विशेषगरी आफुलाई एमालेनिकट ठान्ने बैंकको कर्मचारी सघले पछिल्लो एक दशकदेखि देखाउँदै आएको अराजकताका कारण बैंकको कार्य वातावरण थप लालिंग भएको खबर आज प्रकाशित दृष्टि साप्ताहिकले लेखेको छ ।
याे पनि पढ्नुस एमालेले अनियन्त्रित विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने